Shina milamina laharana zaridaina 8 lehibe Zava-pivarotana rivotra miverina amin'ny alàlan'ny rivotra W-F840-LF-C W-F840-LF Mpanamboatra sy mpamatsy | WELDSMT
Mivarom-bary miteraka fihenam-bidy mafana amin'ny zana-kaody 8 Zones Miverina amin'ny alàlan'ny rivotra W-F840-LF-C W-F840-LF
Ny teknolojia fanitsiana roa sosona manontolo mifototra amin'ny fantsom-pifandraisana misy teboka roa dia miantoka ny maripana mitovy amin'ny ao anaty lafaoro, ny anisotropy tsara amin'ny faritra misy ny mari-pana, ary ny tany dia tsy mamokatra faritra tsy misy tohina noho ny famerenana azy rehefa mafana, ary tsy mamorona aloka.
1. Ny tsy manam-paharoa ela velona mandroso rafitra famolavolana.
2. Rafitra tsara sy azo itokisana.
3. Rafitra fanaraha-maso azo antoka sy azo itokisana.
1. Rafitra fanorana
• Ny teknolojia fanitsiana roa sosona manontolo mihazakazaka ny lafiny teknolojia marobe dia miantoka ny maripana mitovy amin'ny ao anaty lafaoro, ny anisotropy tsara amin'ny faritra misy ny mari-pana, ary ny tany dia tsy mamokatra faritra tsy misy tohina noho ny famerenana azy rehefa mafana, ary tsy mamorona aloka. .
• Manatsara ny fahombiazan'ny hafanana ny famatsiam-bola. Famerenam-bidy haingana sy mahomby, indrindra indrindra amin'ny fametrahana ny lafin-javatra tonga lafatra toy ny motherboards solosaina sy zana-tariby finday, toy ny BGA, CSP, QFP ary tabilao circuit multilayer. Tsy misy andian-dahatsoratra amin'ny faritra tsirairay manakaiky ny mari-pana.
• Modely fanorana ambony sy ambany kokoa, famaranana rivotra tsy miankina, zotra fanakodia roa na faritra trondro fanamainana triple.
• Ny faritra misy ny maripana tsirairay dia manaiky ny volon-dikan'ny modular, ny hafanana miaro lava amin'ny motera mafana sy ny rivotra mafana ary ny tariby famonoana nikelin-tsolika mahery vaika dia mora mitazona sy manamboatra.
2.Ny rafitra fanamafisana
• Karazana fehikibo 400MM, tsy miova tsy miovaova ny hafainganam-pandeha amin'ny hafainganam-pandeha.
3.Cooling sy Soldering Flux Recovery System
• Ny rafitry ny hatsiaka an-tery dia manaiky fizarana roa amin'ny mari-pana famerana rivotra an-tery mba hahatratrarana ny fizahana maimaim-poana; Mivezivezy ny làlana mangatsiatsiaka, tsy misy ny fiovana tampoka, ny fifanakalozana hafanana feno, ary ny haavon'ny hatsiaka indrindra dia mahatratra ny -5 ℃ / S.
• Tsy misy endrika fanivanana, mora madio.
• Ny rafitra fanaraha-maso dia mampiasa ny Mitsubishi PLC, ny solosaina avo dia mampiasa solosaina Lenovo, miaraka amin'ny rafitra fiasa Windows XP ary fampisehoana LCD 17-inch, izay azo antoka sy azo itokisana.
• Ny rindrambaiko fanaraha-maso dia mahery, miaraka amin'ny fanaraha-maso amin'ny fomba maharitra sy ny fitsapana ny curve mari-pana. Ny tranokala sinoa sy anglisy dia azo ovaina na oviana na oviana.
• Mampiasa fiafarana WOGO; ny singa elektrika rehetra haondrana marika, ary ny marika famantarana rehetra dia miaro fanodinana.
• Fandrindrana ny fitanana ny mari-pana, ny fanonerana an-tànana ny fiasa mangatsiaka, ny fifehezana ny mari-pana ao anatin'ny ± 1 ℃.
Parameter an'ny faritra
Isan'ny faritra fanorana
Miakatra 8 + ambany 8
Halavan'ny faritra fanavotana
Up: rivotra mafana; Ambany: rivotra mafana
(Fikomanan'ny rivotra mafana, ny motera Taiwan SAYA)
Isan'ny faritra mangatsiaka
400mm （fehikibo vy vita amin'ny vy）
Parameter an'ny fanaraha-maso
Wire, 3 Phase, 380V 50 / 60Hz
Eo ho eo 4-4.5KW
Tokony ho 15-20 mins
Temp. Fametrahana Range
Efitra Temp.- 380 ℃
Fomba fifehezana ny mari-pana
Fahasamihafana eo amin'ny mari-pana eo amin'ny faritra mampitony
70 ℃, afaka mifanaraka amin'ny fenitra ambony indrindra amin'ny fizaram-barotra tsy mitarika.
Fametrahana ny hafanana amin'ny mari-pana
Ny fihenan'ny hafanana amin'ny PCB
Fampitandremana tsy mahazatra
Tsy miteraka be loatra na ambany loatra ny mari-pana rehefa tsy mitohy ny hafanana temperature
Previous: Rafitra famandrihana roa-oniversite tsy miovaova ara-toekarena W-250DS-LF
Manaraka: Faka-fiasa SMT mifototra maro sy apetaka HCT-800S SMT Surface Mounting Machine
Masinina Famonoana Diy Reflow
Masinina misy lozisialy an'habakabaka mafana
Milina fitondra mikorontana
Masinina looldold smt
JUKI Misioner haingam-pandeha ambony haingam-pandeha ambony indrindra FX-3RAL SM ...
Ny afak'om-pitondrana kely miverina any ambany any Oven W-F530 W-F830 ...